रोग अनुसार भोजन व्यवस्थापन : के खाने, के नखाने ?:: Naya Nepal
रोग अनुसार भोजन व्यवस्थापन : के खाने, के नखाने ?
खाना नै ओखति हो र खाना नै विष पनि । जथाभावी खानपानले शरीरलाई रोगी र जीर्ण बनाउँछ भने सुपाच्य, ताजा र सन्तुलित खानाले शरीरलाई निरोगी । कस्तो खाना खाने र कति खाने भन्ने कुराले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यो कुरा अझ त्यसबेला महत्वपूर्ण हुन्छ, जतिबेला हामीलाई कुनै न कुनै रोगले च्यापिसकेको हुन्छ ।
जस्तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम । यस्तो अवस्थामा कस्तो खानपान उचित र कस्तो खानपान अनुचित हुन्छ ? जान्नुपर्छ ।
फाइबरयुक्त सागसब्जी सेवन गर्ने । सिमी लगायतका गेडागुडीमा फाइबरको मात्रा दुई गुणा बढी हुन्छ । यसलाई तरकारीको रुपमा भन्दा सुपको रुपमा खानु लाभदायक हुन्छ ।
मौसमी फलफूल खाने । आलुबखडामा फाइबर धेरै हुने भएकोले कब्जियतको समस्यामा आलुबखडाको सेवन फाइदाजनक मानिन्छ ।
किशमिश, अंजीर, खजुरमा फाइबरको मात्रा धेरै हुन्छ । जसले कब्जियत हटाउन मद्दत गर्छ । ब्रोकाउली, होल ग्रेन, अन्न, पाकेको केरामा फाइबरको मात्रा धेरै हुने भएकाले यस्ता खानेकुरा खानु लाभदायक हुन्छ ।
अत्याधिक मासुजन्य परिकार, चिल्लोचाप्लो, तारेको, दुधजन्य परिकार, वोसो बढी भएको खानेकुरा, प्रशोधित खानेकुरा, मैदाजन्य खानेकुरा खान उचित हुँदैन । कालो दाल, भन्टा, मुसुरो लगायत धेरै चिसो खानेकुरा खानु हुँदैन ।
लौकाको जुस, ताजा फलफूल, सागसब्जी, मकै, ग्रीन टि सेवन गर्ने । संभव भएसम्म शाकाहारी भोजन अपनाउने । कम चिल्लो भएका दुग्धजन्य उत्पादनहरु खानुपर्छ ।
खानामा सोडियमको मात्रा घटाउने । प्रशोधित खानेकुरा, रातो मासु, मदिराजन्य पेय नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कफी, चिया पनि कम पिउनुपर्छ । उच्च रक्तचापमा चुरोट अरु बढी हानिकारक हुन्छ । त्यसैले धुमपान त्याग्नुपर्छ ।
–हरियो सागसब्जी, सोया, मुंग, कालो चना, ब्राउन राइस, राजमा तथा अण्डाको सेतो भाग खानुपर्छ । प्रोटिन तथा फाइबरयुक्त खानेकुरा । फलफूलमा चेरी, स्ट्रबेरी, स्याउ, सुन्तला, अनार, मेवा र सागसब्जीमा करेला, लौका, तोरी, फर्सी, काक्रा उपयुक्त हुन्छ । कलेरा, लौका, टमाटर, एलोभेराको जूस मधुमेहका विरामीलाई लाभदायक मानिन्छ ।
गुड, चिनी, मह, चकलेट, केक, पेस्ट्री लगायतका गुलियो खानेकुरा उचित हुँदैन । मैदा, सुजी, सेतो चामल, सेतो ब्रेड, नुडलस, पिज्जा, विस्कुट नखाने । तारेको तथा भुटेको खानेकुरा, च्याख्ला, मकैको पिठो, प्याकेटका खानेकुरा । आप, केरा, अंगूर, अनारसमा चिनी धेरै हुने भएकोले यस्ता फलफूल पनि खानु हुँदैन ।
कागती, किबी, ब्रोकाउली, टमाटर, शिमला मिर्च लगायत भिटामिन सीले भरिपूर्ण खानेकुरा खाने । चोक्करयुक्त गहुँको रोटी, दलिया, मुंगको दाल खाने । प्रोटिन, भिटामिन बी, तथा फाइबरयुक्त खानेकुरा जस्तै, दाल, सोयावीन, अण्डा, हरियो सागसब्जी उचित हुन्छ । भिजाएको बदाम आस्थमाका विरामीका लागि लाभदायक हुनसक्छ ।
तारेको तथा भुटेको खानेकुरा, जंक फुड, बासी खाना उचित हुँदैन । दुधजन्य उत्पादन तथा अमिलो र चिसो खानेकुरा खानु हुँदैन । केरा, पाकेको चुकन्दर, कटर पनि लाभदायक हुँदैन ।
केरा, दही चामल, मुंगको दालको जाउलो वा सुप, लौका, रायता लगायतको हल्का खानेकुरा उचित हुन्छ । यसैगरी काक्रो, तरबुजा, खरबुजा जस्ता पानीको मात्रा उच्च हुने खानेकुरा लाभदायक हुन्छ । मेवा, अनार लगायतका फलले फाइदा गर्छ । नरिवल पानी, मोही , कागती पानी, लस्सी, उखुको रस, फलफूलको जूसका साथै दहीमा केरा मिसाएर पनि खान सकिन्छ । यसले डायरियामा आराम दिन्छ ।
आलू, इम्ली, भण्टा, ब्रोकाउली, प्याज, गेडागुडी, बन्दा, अचार, तारेको, मसलायुक्त, बासी तथा सचिलै नपच्ने खानेकुरा उचित हुँदैन ।
स्याउ, मेवा, अंजीर, अनार, किवी लगायत भिटामिन ‘सी’ युक्त खानेकुरा लाभदायक हुन्छ । यसैगरी पालुङ्गो, चुकन्दर, ब्रोकाउली, रातो भेडे खुर्सानी, मशरुम, शलगम , गाँजर लगायतका सागसब्जीले फाइदा गर्छ ।
दही, पनीर, चीज कम खाने । यसले कफ बढाउनसक्छ । यो मौसमी भएकोले रातकोे समयमा दही नखाने । तारेको खानेकुरा, मसलेदार खानेकुरा, चिसो खानेकुरा, ह्वाइट ब्रेड, पास्ता , नुडल्स नखाने ।
कोभिडको जोखिम छ दसैँमा नयाँ नोट दिँदैनौँ : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको दसैँसहितका चाडपर्वमा नयाँ नोट सटही सुविधा नदिने भएको छ। विगतमा दसैँमा नयाँ नोट सटहीको सुविधा दिँदै आएको केन्द्रीय बैंकले यसपटक कोभिड संक्रमणको जोखिम भएको भन्दै सटही सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार कुनै पनि कार्यालयहरूबाट यस वर्षको दसैँ प्रयोजनका लागि नयाँ नोट सुविधा नदिइने उल्लेख छ।
भीडभाड रोक्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
नेताहरुद्धारा उमेरमा घोटाला
काठमाडौं । भारतको बिहार राज्यमा चुनाव हुँदैछ । यही चुनावका कारण नेताहरुका नयाँ नयाँ फन्डा सार्वजनिक भइरहेका छन् । हुनत बिहारमा जुन कुरामा घोटालामा पर्छन् त्यो कम हुन्छ भनिन्छ । चाहे उमेरको होस्, चाहे अपराधको होस् वा जग्गा जमीनको । पहिलो पटक उमेरमा घोटाला हाल चर्चामा छ । बिहारमा उम्मेदवार नोमिनेसन भरिरहेका छन् । जसमा रोचक घटना बाहिर आइरहेको छ । कोही आफ्नो उमेर कम बताइरहेका छन् भने कोही बढी । कुर्था सिटममा जदयूका उम्मेदवार सत्यदेव सिंहको जन्म २० जुन १९५० भनी विधानसभाको वेबसाइटमा उल्लेख छ । यो हिसाबले उनी ७० पार भइसके । तर उनले आफ्नो उमेर ६१ वर्ष लेखाएका छन् । सन् २०१५ मा पनि उनले आफ्नो उमेर ५६ वर्ष बताएका थिए ।
त्यस्तै सरोज यादव राजदको टिकटमा बडहरा सिटबाट खडा भएका छन् । उनी मौजुदा विधायक पनि हुन् । उनले सन् २०१५ मा उनको एफिडेविटमा ३३ वर्षको उमेर पूरा भएको देखाइएको छ । यसपटक ३० वर्ष आयु पूरा भएको देखाइएको छ । ५ वर्षअघिका अनुसार उनको उमेर ३८ वर्ष भएकोछ । तर उनले त पहिलेभन्दा झन् उमेर घटाएका छन् । त्यस्तै कुटुम्बा सीटबाट कांग्रेसका उम्मेदवार राजेश कुमार सन् १९८५ देखि राजनीतिमा रहेका छन् । उनको जन्म १९६७ जनवरी २८ लेखिएको छ । यो हिसाबले उनी ५४ वर्षका भए । उनले ५१ वर्ष लेखाएका छन् ।
महिलाको उमेर सोध्नु हुन्न भन्ने मान्यता भए पनि मैदानमा उत्रेपछि उमेरको मतलब त हुन्छ नै । भाजपाकी निक्की हेम्ब्रमले सन् २०१५ मा ४२ वर्ष देखाएकी थिइन् । अहिले पनि उनको उमेर ४२ नै छ । त्यस्तै जदयूका जयकुमार सिंह नितिशकुमार नेतृत्वको सरकारका मन्त्री हुन् । उनको उमेर ५ वर्षमा १० वर्ष बढेको छ । उनको जन्म १ मार्च १९६३ भनी विधानसभाको वेबसाइटमा छ । यो हिसाबले उनको उमेर ५८ वर्ष हुनुपर्ने थियो । तर उनको उमेर सन् २०१५ मा ४६ बताइएको थियो । अहिले ५६ बनाइएको छ । यति गर्दा पनि उनको वास्तविक उमेरसँग अझै मेल खाँदैन ।
जदयूको टिकटमा खडा भएका रामानन्द मण्डलले ५ वर्षको अवधिमा ८ वर्ष उमेर बढाएका छन् । सन् २०१५ मा ४७ वर्ष बताएका उनको अहिले ५५ वर्ष पूरा भएको उल्लेख छ । त्यस्तै भाजपा नेता ज्ञानेन्द्रकुमार सिंहको उमेर पनि ५ वर्षमा १० वर्ष बढाइएको छ । सन् २०१५ मा ५१ लेखाएका उनले अहिले ६१ वर्ष लेखाएका छन् ।भाजपाका नेता बृजकिशोर विन्द सन् १९९१ देखि राजनीतिमा छन् । उनको जन्म १ जनवरी १९६६ लेखिएको छ । उनी अहिले ५५ वर्षका भए । तर उनले सन् २०१५ मा ५६ बताएका थिए । अहिले ६१ वर्ष बताएका छन् । आठ वर्ष बढाइएको छ ।